Apple inotangisa Beta 3 yeIOS 11, tvOS 11 uye macOS Yakakwira Sierra | IPhone nhau
Apple inotangisa Beta 3 yeIOS 11, tvOS 11 uye macOS Yakakwira Sierra
Vhiki rino Apple yanga yakatendeka pakusarudzwa kwayo uye ichangotanga, Muvhuro masikati, iyo Beta nyowani yeIOS 11. Iyi ndiyo yechitatu yekutarisa vhezheni yesoftware nyowani yeApple nharembozha izvo zvinosvika kubva mumwedzi waGunyana, uye panguva yacho zvinongowanikwa kune vanogadzira. Shanduko muDare Rekudzora, mashandiro matsva ekuita kwakawanda kweiyo iPad uye yakareba etcetera inoumba runyorwa rweshanduko mune iyi nyowani vhezheni ye iPhone, iPad uye iPod Kubata kwatakakuudza kare nhau zhinji. Yakaburitsawo macOS 10.13 uye tvOS 11 Beta 3.
Iyi iOS 11 Beta 3 parizvino inongowanikwa kune vanogadzira, asi Ruzhinji Beta rinotarisirwa kusvika mumazuva mashoma anotevera kune avo vashandisi vakanyoreswa muchirongwa ichi chinokutendera iwe kuti uise aya maBetas pasina kubhadhara mari yegore rega kuti uve mugadziri. Pamusoro peIOS 11, Apple yakatanga zvakare Beta yechitatu yemamwe mapuratifomu: tvOS 11 uye macOS High Sierra 10.13. Takamirira kuti tione kana ichatangisawo Beta yechitatu yeWatchOS 4, yatisingazive nezve izvozvi.
iOS 11 ichaunza shanduko dzakakosha pamashandisiro atinoita yedu iPhone ne iPad. Itafura yeApple inowana sarudzo nyowani dzekuita zvakawanda uye iri padhuze padhuze nepuratifomu, macOS, ine doko iyo inobvumidza kukurumidza kunyorera kushandura, uye mukana wekushandisa iyo yakatsemurwa skrini uye rimwe hwindo rinoyangarara pachiratidziri. Kudhonza mafaera pakati windows ndochimwewo chiitiko chinozorumbidzwa zvikuru neavo vaida chimwe chinhu chinobudirira cheiyo iPad.
Kune zvakare zvakawanda shanduko muIOS 11 ye iPhone, senge nyowani yekudzora nzvimbo iyo inobvumidza kuwana kune aimbove asina kuwanikwa mabasa, uye izvo kunyange zvinokutendera iwe kugadzirisa mamwe mapfupi. Iyo nyowani yeAugmented Reality chikuva, mukana wekutarisa magwaro kubva kuNotes application, kana kugona kushandisa QR kodhi zvakananga kubva kuIOS kamera ingori mashoma mashoma ayo. Iwe unogona kutarisa mavhidhiyo kuti uone iyo inonyanya kukosha nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa Beta 3 yeIOS 11, tvOS 11 uye macOS Yakakwira Sierra
Yatove mukuyedzwa, kuti uone kuti inoshanda sei.
Iyo patent nyowani inoratidza inokwanisika kumeso kuvhura paMacs
Zvese zvekuziva nezve zvekugovana skrini uye kutsvedza pamusoro mu iOS 11